Uhlobo indlela yokukhokha wesikweletu ophendukayo
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Uhlobo indlela yokukhokha wesikweletu ophendukayo
Ezikhanyisayo credit, kungakhathaliseki inani lemali noma inombolo owasebenzisayo, kodwa kuhloswe ukuba abuyisele ethile imali imisiwe, indlela yokukhokha kunezinhlobo eziningana. Lapho isicelo ikhadi, ngesikhathi ukusetshenziswa, futhi manje akhethiwe ngemuva kokusebenzisa.
ribonucleic obujwayelekile, ngendlela ubizwa ngokuthi uhlobo pre-ukubhaliswa ezikhanyisayo credit, kuyinto uhlobo bayobhaliswa udumo ezikhanyisayo ngesikhathi isicelo ikhadi. Nquma inkokhelo ethile ngenyanga ngesikhathi inkontileka ikhadi, lidlula inani elithile ngomzuzu imali bazoqhubeka bekhokha ezinyangeni ezilandelayo. Kuye kwethulwa enkampanini enkulu credit. Uma inani lemali ukusetshenziswa lingaphansi kuka 200,000 yen, Ukudonswa aphansi kungenziwa ebekiwe kusukela 5000 yen, ungacacisa kuze kufinyelele 100,000 yen. Uma ushiya wakhetha indlela yokukhokha, ngisho noma ucacise inkokhelo 1 esigcwele ngesikhathi shopping kuyothiwa ngokuzenzakalelayo washintsha ukuze ezikhanyisayo credit.
futhi kamuva, eminyakeni yamuva izikhungo umhlinzeki lwaqala, kukhona uhlobo lokukhokha ukuthi ubizwa ngokuthi "ribonucleic kamuva". Lokhu kungemuva kokuba yezitolo kuyindlela ukushintsha credit ezikhanyisayo okunikelwe inkampani credit ngocingo noma nge-Internet. Lokusebenzisa yezitolo, njengoba kungenzeka ukushintsha bebodwa kuphela okufunayo e-credit ezijikelezayo, ungakwazi ukuba sizikhandle ukusebenzisa. In izinhlelo ukuthi izinkampani ezinkulu sethule, kungenzeka futhi ukuthi sisebenzise igama ukusetshenziswa ngemuva kokushintshwa uhlobo ezikhanyisayo credit, kodwa noma kunjalo.
ezikhanyisayo credit umsebenzi ikhadi
Ngaphezu kwalokho, iningi jikelele credit card ezikhanyisayo credit umsebenzi ohambisana, ngisho lowo has a inkontileka ezilandelayo ngenyanga eyisamba, isibe ukuba bakwazi ukukhetha credit ezikhanyisayo esitolo wena. Indlela yokukhokha ngokuthi kuka-the-counter ezikhanyisayo credit, ngesikhathi ezitolo abathengisi nge nokusingatha ezikhanyisayo credit, ungacacisa ngamunye icala ezikhanyisayo credit.
Uma isaziso ngaleso sikhathi ukusetshenziswa ikhadi ngokuthi "in the credit ezikhanyisayo", futhi izindleko kwathatha kuya yezitolo ezikhanyisayo credit. Kodwa kukhona futhi ukuthi inqubo efana ecacisa lenkokhelo nyangazonke imali edingekayo, ngoba kukhona umhlangano ngamunye nenkampani yakho yekhadi lesikweletu, isiqinisekiso Ungase ufune ukulibeka.
inkomba | ezikhanyisayo credit umsebenzi ikhadi abadumile kude uhlu
ezikhanyisayo lesikweletu kuphela ikhadi
Futhi, kulabo ehola inkampani waqala ukuthengisa eminyakeni yamuva, kukhona into okuthiwa ribonucleic ikhadi ozinikele. Ngo ikhadi ngokukhethekile credit ezijikelezayo, ngeke sisetshenziswe ngaphandle ukukhokha ribonucleic esibekiwe ngesikhathi inkontileka. Noma ukhetho esilandelayo ngenyanga eyisamba bethenga ngamunye, awukwazi ukushintsha ukuthi noma ezikhanyisayo credit.
Uma nyangazonke ukunquma inani lemali okumele asetshenziswe ikhadi, cishe uzoba udinga ukudala ikhadi ukuthi bangakwazi ukukhokha imali ribonucleic. Iningi ikhadi lesikweletu, ngisho noma inkontileka ezilandelayo ngenyanga eyisamba, kungenzeka ukushintsha e-credit ezijikelezayo. Inqubo ilula, itholakala kwi enetheni ngaphandle kuka-the-counter. Ngaphezu kwalokho, ungase futhi ushintshe ucingo ukuze nabasekela amakhastoma. Ngaphezu kwalokho, noma ezikhanyisayo nguye ofanelwe udumo ngenxa yezitolo ngasinye, kufanele bakwazi ukuba lokhu noma ucacise ngenyanga ezayo yinhlama-sum yokukhokha.
Ungase futhi ucacise isikhathi kuphela ezikhanyisayo credit ukuthi ukuyothenga eningi ithuba kwesizini. Ngaphezu kwalokho, kuye kwaba ukuvumela kusengaphambili kweziningi ikhadi.
inkomba | icala sihlaselwa abantu enkulu ezikhanyisayo lesikweletu kuphela ikhadi abadumile kude ohlwini
ukuphila kwakho futhi ushintsho imibono sebhithi
iholo indlela yokusebenzisa ngokuhambisana esimisweni imali, inani kunalokho kancane e izinkokhelo zenyanga kusengaphambili esibekiwe, ongakwenza ukuze uphindisele ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe ukukhokha eningi ngenyanga. Ezikhanyisayo lesikweletu ngokuya ngokusetshenziswa, kuba ithuluzi ezingasiza ekuphileni. .
iholo indlela yokusebenzisa ngokuhambisana esimisweni imali, inani kunalokho kancane e izinkokhelo zenyanga kusengaphambili esibekiwe, ongakwenza ukuze uphindisele ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe ukukhokha eningi ngenyanga. Ezikhanyisayo lesikweletu ngokuya ngokusetshenziswa, kuba ithuluzi ezingasiza ekuphileni. Ingabe ecacisiwe inani izinkokhelo zenyanga, ungakwazi ukuba abuyisele ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe ukukhokha eningi ngenyanga. Ezikhanyisayo lesikweletu ngokuya ngokusetshenziswa, kuba ithuluzi ezingasiza ekuphileni. Ingabe ecacisiwe inani izinkokhelo zenyanga, ungakwazi ukuba abuyisele ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe ukukhokha eningi ngenyanga. Ezikhanyisayo lesikweletu ngokuya ngokusetshenziswa, kuba ithuluzi ezingasiza ekuphileni.